အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်း ဆုံးဖြတ်ချက်
အမေရိကန်ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း အတိုးနှုန်းကိုအနည်းဆုံးသုံးကြိမ်တိုးမြှင့်မည်ဟု ဈေးကွက်က ခန့်မှန်းထားကြပါသည်. အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုအခြေအနေများကို ကြည့်ပြီး အတိုးနှုန်းတင်မတင် ဆုံးဖြတ်မှာ ဖြစ်ပါသည်. ဗဟိုဘဏ်အတိုးနှုန်ူ တင်နိုင်ခြေများပါက ကြာမြင့်စွာ အကျဘက်တွင်ရှိနေသည့် ပြီးခဲ့ပြီ ဒေါ်လာဈေးကို ပြန်လည်အားကောင်းလာစေနိုင်ပြီး အခြားတစ်ဖက်တွင် အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေနည်းပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာအား အရောင်းများပြီး တန်ဖိုးကျဆင်းသွားစေနိုင်ပါသည်. ဗဟိုဘဏ် Fed ၏ အတိုးနှုန်းဆုံးဖြတ်ချကကို 20:00 MT အချိန်တွင်ထုတ်ပြန်ပါမည်. Fed ရဲ့သဘာပတိ Jerome Powell၏ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကို 20:30 MT အချိန်တွင်စတင်ထုတ်ပြန်ပါလိမ့်မည်.